လေပြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » လေပြေ	4
Posted by ကာရံ on May 29, 2015 in Poetry |4comments
﻿မေ့မျက်﻿ရည်﻿ ပါးပြင်﻿ထက်﻿မှာ ရစ်﻿ဝဲလို့﻿ပေါ့
သစ္စာဆိုစကား တူကြိုးစားရင်း ခုဆို ခုဆို﻿လေ
အဖူး အငုံ ပွင့်﻿လာအစဉ်﻿လန်းရ﻿အောင်﻿
﻿မေ့အနား ﻿လေ﻿ပြေ တစ်﻿﻿ဖြေး﻿ဖြေးတို﻿က်﻿ခက်﻿ပါ﻿စေသား
ကာရံ ၂၉့ ၅့ ၂၀၁၅
Alinsett @ Maung Thura says: ကဗျာတွေ စာတွေနဲ့ ငါ့သူငယ်ချင်းလည်း အသားကျနေပြီ….
ကာရံ says: ဟုတ်ပသူငယ်ချင်းရေ
မြစပဲရိုး says: . မုန်တိုင်း မလာခင် လဲ လေပြေ လာတယ်။
. မုန်တိုင်း ပြီးချိန်လဲ လေပြေ လာတယ်။
ဒါက ဘယ်လို လေပြေတုန်းကွဲ့။ :-))
အောင် မိုးသူ says: အချစ်သည် လေပြေ